Giroud: Rajo ayaan ka qabaa inaan dhaliyo 15 gool oo EPL ah. - Caasimada Online
Home Warar Giroud: Rajo ayaan ka qabaa inaan dhaliyo 15 gool oo EPL ah.
Giroud: Rajo ayaan ka qabaa inaan dhaliyo 15 gool oo EPL ah.
Weeraryahanka kooxda Arsenal Olivier Giroud ayaa qirtay inuu hada gudaayo 12 milyan oo ginni oo ah lacagtii ay kula soo wareegtay Arsenal wuxuuna rajo ka qabaa inuu Barclays Premier League ka dhaliyo 15 gool.
Giroud, oo 26 jir ah, ayaa Gunners uga soo biiray kooxda Faransiiska ka dhisan ee Montpellier, wuxuuna laba mar shabaqa soo taabtay kulankii barbaraha 3-3 ah ay Arsenal la dhaafi weysay Fulham isagoo dhaliyey goolkiisii lixaad ee tartamada oo dhan,
“Waxaan kusoo bilowdaa kulamada inta badan iyadoo aanan qabin wax shaki ah waxaana dareemayaa inaan fiicanahay,” ayuu yiri Giroud.
“Waan ku farxi lahaa hadii aan xilli ciyaareedkaan dhaliyo goolal u dhexeeya 12 ilaa 15 gool oo horyaalka ah.”